Wakiil cusub oo Qaramada Midoobey ay u soo magacaabatay arimaha Soomaaliya – Puntland Voice
Wakiil cusub oo Qaramada Midoobey ay u soo magacaabatay arimaha Soomaaliya
June 10, 2010 8:42 am Views: 15
Wareegto uu soo saaray Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Bank-moon ayaa magacaabay Wakiil cusub oo qaramada Midoobey wakiil uga noqon doona arimaha Soomaaliya kaasoo lagu badalay wakiilkii hore Axmed Walad Cabdala.
Diblomaasigaani cusub ee Soomaaliya loo soo magacaabay ayaa lagu magacaabaa Augustine Mahiga waxaana uu u dhashay Dalka Tanzania islamarkaana uu dalkiisa wakiil uga soo noqday Qaramada Midoobey.
Wakiilka cusub Augustine Mahiga ee arimaha soomaaliya waxaana looga fadhiyaa inuu arimaha soomaaliya si hoose u galo wax qabadna la yimaado ka badan intii uu qabtay wakiilkii hore.
Wakiilka cusuub ee Qaramada Midoobey arimaha Soomaaliya Augustine Mahiga islamarkaana u dhashay Dalka Tanzania ayaa la sheegay inuu hore ula soo shaqeeyay hay’ada qaxootiga Dunida ee qaramada Midoobey hoos tagta UNHCR halkaasoo sanado badan uu ka soo shaqeeyay.
Hadii dib lo raaco taariikhda Wakiilkii hore ee Qaramada Midoobey ee arimaha Soomaaliya Axmed Walad Cabdala gaar ahaan waxyaabihii uu qabtay ayaan dad badan oo siyaasada u janjeera sheegeen inuusan wax horu mar ah qaban marka laga reebo shirkii Dob u heshiisiinta ee Jabuuti markaasoo uu ka shaqeeyay in qeyb maxaakiimtii ka mid ah iyo Dowladii C/laahi Yuusuf isku soo jiideen inkastoo ujeedo qarsoon ay ka leeyihiin.